Hooyo looga qaatay Noorweey wiilkeeda oo bil jiray | shumis.net
Home » News » Hooyo looga qaatay Noorweey wiilkeeda oo bil jiray
Hooyo looga qaatay Noorweey wiilkeeda oo bil jiray
Noorway ayaa haweeney soomaali ah oo wiilkeeda muddo bil jiray dowladda ka qaadatay, kadib markii ay ku eedeeyeen ineeysan xanaaneyn karin.
Dhacdadan ayaa naxdin iyo amakaag ku riday hooyaadaas iyo soomaalidaba dalkaasi. Hooyadan ayaa saxaafada u warantay sheegtay in eedeynta hey’adaha carruuraha qaadata ay aheyd ineeysan kalgaceyl iyo xanaano siin wiilkeeda oo dhalaan ah.Hooyadan oo lugu magacaabo Samiira C/raxmaan Kheyre ayaa sheegtay in arrintaan ay timid in meel cidlo ah ay daganeyd suuragalna u noqon in dadkeedii ama cid kasta oo caawin laheyd muddadii ay umusha aheyd u yimaadaan ama loo diiday.
Samiira oo wiilkeeda haatan ku dhawaad sadex bilood jiro ayaa sheegtay ineey qabsatay qareen difaaca iyo hey’adaha u dooda carruurta si wiilkeeda loogu soo celiyo. Xirriiro ay la sameeysay jaaliyada soomaalida magaalada Oslo ee dalkaasi ayaan suuragal noqon ineey wax ka qabtaan maqashada heeysata Samiira. Talaabadan ayaa ku soo beegmeysa xilli dhawaan la filayo in waraaqihiihii danjironimo laga gudoomo safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiyi doona dalalka Iskaandaneefiyaanka oo haatan xaruntiisa noqon doonto magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan. Mana ahan markii ugu horeeysay ee qoys soomaali ah laga qaato carruurahooda.
Noorweey waa dal si aan xishood laheyn u gurta carruuraha ajaanibta oo ay soomaalida ka mid tahay, waa dal la oran karro ma ahan mid sharuucda iyo xeerarka caalamiga ah ee u dagsan dhalaanta iyo carruuraha.
Title: Hooyo looga qaatay Noorweey wiilkeeda oo bil jiray